Mapisarema 92 - Bhaibheri Dzvene [Shona Bible 2009]
Zvakanaka kuvonga Jehovha, Nokuimbira zita renyu nziyo dzokurumbidza, imwi Wokumusorosoro;
Kuparidza unyoro bwenyu mangwanani, Nokutendeka kwenyu usiku hwose,
Nechinoridzwa chine hungiso gumi, nomutengeramwa; Nenzwi rakanaka pambira.
Nokuti imi, Jehovha, makandifadza nezvamakaita; Ndichafara kwazvo namabasa amaoko enyu.
Mabasa enyu akakura seiko, Jehovha! Mifungo yenyu yakadzika kwazvo.
Asina njere haazvizivi; Benzi harinzwisisi izvozvi,
Kana vakaipa vachimera souswa, Uye kana vaiti vose vezvakaipa vachikura; Zvinoitwa kuti vaparadzwe nokusingaperi.
Asi imwi Jehovha muri kumusoro nokusingaperi.
Nokuti tarirai, Jehovha, vavengi venyu, Nokuti tarirai, Jehovha, vavengi venyu vachaparara; Vaiti vose vezvakaipa vachaparadzirwa.
Asi runyanga rwangu makarusimudza sorunyanga rwenyati; Ndakazodzwa namafuta matsva.
Ziso rangu rakaona zvakaitirwa vavengi vangu, Nzeve dzangu dzakanzwa zvakaitirwa vaiti vezvakaipa, vakandimukira.
Wakarurama uchamera somuchindwe; Achakura somusidhari paRebhanoni.
Vakasimwa mumba maJehovha Vachakura muvazhe dzaMwari wedu.
Vacharamba vachibereka zvibereko pakukwegura kwavo; Vachava vanyoro navatsva;
Kuti vaparidze kuti Jehovha akarurama; Ndiye dombo rangu, hapana chinhu chisina kururama maari.